Mamorona borosy Photoshop anao haingana | Famoronana an-tserasera
ny borosy Photoshop Izy ireo dia be mpampiasa amin'ny mpanakanto sary izay te-hampiditra antsipirihany fohy sy haingana amin'ny asany sary. Manomboka amin'ny borosy misy tsipiriany kely ka hatramin'ny borosy sarotra dia sarotra, ny tolotra an'ity karazana loharano ity amin'ny Internet (ny sasany ho alaina eto). Mamorona borosy Photoshop anao manokana haingana, mpiara-miasa lehibe io rehefa manatsara ny famoronana satria afaka miasa miaraka amin'ny loharanom-pahalalanao manokana.
Mamorona borosinao manokana Photoshop hanampy anao mitsitsia fotoana amin'ny tetikasanao sary Mandritra ny fotoana ahafahanao mamorona tranomboky amin'ny borosinao manokana. Mamorona borosy tsy manam-paharoa Ho an'ireo tetik'asa sary anananao, apetaho ny sonia mpanakanto anao toa ny borosy, atambaro ny karazana borosy rehetra hahatratraranao zava-baovao tanteraka. Ny borosy dia loharanom-pahalalana sary izay tsy tokony hohadinointsika mihitsy.
Podemos mamorona borosy misy singa sary:
Ny azo atao miaraka amin'ny borosy dia tsy misy fetra mahay mamorona firafitra, lamina ary ny vokatra hafa manintona ny maso.
Ny hany zavatra ilaintsika hamoronana borosy dia ny fananana singa sary hamadika azy io ho borosy.
Para mamorona borosy miaraka amin'ny sary izay tsy maintsy ataontsika dia ny misafidy ny sary fotsiny amin'ny tsindrio mifehy tsindry bebe kokoa eo amin'ny sosona sary. Aorian'izany, ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny mankanesa any amin'ny menio ambony ary misafidy manova / mamaritra ny sanda borosy, eto no itahirizantsika ny borosintsika.
Taty aoriana ny hany zavatra tsy maintsy ataontsika hampiasa ny borosintsika dia ny tadiavo ao amin'ny katalaogin'ny borosy Photoshop. Afaka mamorona isika borosy miaraka amin'ny sonianay mpanakanto ary apetaho amin'ny maha logo azy haingana kokoa. Ny olona sasany dia mampiasa an'io karazana borosy amin'ny fametahana mari-drano amin'ny asanao sary.
Afaka minitra vitsivitsy dia afaka mamorona borosinao manokana ary ampiasao amin'ny sary an-tsary rehetra. Fanandramana miaraka amin'izy ireo ary mahafinaritra anao amin'ny famoronana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Mamorona borosy Photoshop anao manokana